Sheekh Shariif, Cabdi Qaasim Iyo Saacid Oo Ka Tacsiyeeyey Geeridii C/rizaaq X. Xuseen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sheekh Shariif, Cabdi Qaasim Iyo Saacid Oo Ka Tacsiyeeyey Geeridii C/rizaaq X. Xuseen
2nd February 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Siyaasiyiin dalka Soomaaliya horay uga soo noqday madaxweynayaal iyo Raysul wasaarayaal KMG ah ayaa ka tacsiyeeysay geerida ku timid R/wasaarihii hore ee Soomaliya C/risaaq Xaji Xuseen, iyaga oo ku amaanay waxqabadkiisa xilii uu xilka hayay iyo sidii uu ula socday xaaladda wadnaka.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif SHeekh Axmed ayaa ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeeyay geridii ku timid Allaha u naxariistee R/wasaarihii hore ee Soomaaliya C/risaaq Xaaji Xuseen oo ku geeriyooday Mareykanka.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in C/risaaq Xaaji Xuseen uu mar dhow ku bartay dalka Mareykanka islamarkaana uu kala sheekeeystay xaaladda dalka.
“Waxa uu ahaa mas’uul weyn oo ka baxay ummadda Soomaaliyeed, dhawaan ayaan kula kulmay Mareykanka, waxaana la qaatay kulan qado ah, wuxuuna ahaa shaqsi aad uga warhaya xaaladda dalka xusuustiisuna ay wanaagsaneyn. Inna Lillaahi Wa Innaa Ileyhi Raajicuun’’ ayuu yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Sidoo kale, C/qaasin Salaad Xasan, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeeyay geerida ku timid Allaha u naxariistee R/wasaarihii hore ee Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay in uu la soo shaqeeyay xilligii uu R/wasaaraha ka ahaa dalka C/risaaq Xaaji Xuseen.
R/wasaarihii hore Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa isna ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allaha u naxariistee R/wasaarihii hore ee dalka marxuum C/risaaq Xaaji Xuseen.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa aas qaran u sameyneysa marxuum C/risaaq Xaaji Xuseen, iyadoo u magacowday guddi qaban qaabiya aaska Qaran ee R/wasaarihii hore ee geeriyooday Allaha u naxariistee C/risaaq Xaaji Xuseen.
Guddiga dowladdu u magacaawaday aaska C/rizaaq Xaaji Xuseen ayaa go’aamiyey in lagu aaso caaasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Kismaayo Oo Xalay Bandow La Saaray Isgaarsiinata Laga Jaray